Soo dejisan Gmail 6.10.23.137993986 – Vessoft
Soo dejisan Gmail
Gmail – software ah si ay u maareeyaan email ka adeega Google. Muuqaaladan ugu weyn ee software-ka waxaa ka mid ah fariimaha, shaqo la mail aan heli karin internet, raadiyo fayl iyo fariin, spam furid, autofilling cinwaanka bar iwm Gmail go’aansan si toos ah farriimaha soo socda ee qaybaha kala duwan in u saamaxaaya in ay si deg deg ah u aragto macluumaadka looga baahan yahay. Gmail kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan email habka xisaabaadka kala duwan iyadoo la isticmaalayo goobaha qaybiyay. Software waxay leedahay interface ah dareen leh oo si sahlan loo isticmaali.
Maamulka haboon ee email
Taageerada xisaab kala duwan
Fursadaha Wide ee goobaha
Haboon iyo dareen interface
Gmail Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Mail.Ru 5.3.0.19873
E-mail Codsiga waxaa la shaqeeyaa sanduuqyada boosta ka adeegyada email caan ah. Software waxaa ka mid ah nidaamka ku haboon sifeynta oo ka mid ah farriimaha soo socda.
English, Français, Español, Deutsch... Adobe AIR 21.0.0.176
Extensions Software ee awoodsiinta ka mid ah qalabka. Software ayaa awood u tahay in la abuuro ama maamusho codsiyada horumariyo luqadood oo kala duwan barnaamijyada.
العربية, English, Українська, Français... Onavo Count 2.7.2
Games Kulan xujo ee horumarinta macquulka ah iyo fikirka ciyaaryahan. Kulankaan ayaa waxa uu leeyahay gameplay cajiib ah inta lagu guda jiro taas oo ah ciyaaryahanka waxaa si tartiib tartiib ah u helo dhibcood sare.
English, Español, 中文, Português... Mova 1
العربية, English, Українська, Français... Chromecast 1.14.11
English, Français, Deutsch, Русский... AnTuTu Benchmark 6.2.6
Imtixaanka Software awood badan si ay u tijaabiso qabadka qalabka. Software soo bandhigayaa warbixin ku faahfaahsan oo ku saabsan awoodaha qalab iyo u saamaxaaya in ay is barbar natiijada benchmark qalab kale.
العربية, English, Français, Español... VLC 2.0.6